अनिशालाई भेट्न मन छ हो बाबु भनेर सोध्दा ‘भेट्दिन’ भनेका थिए कन्चनले; (हेर्नुस् भिडियो) – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २४, २०७७ समय: १:२९:२७
घरि-घरी आँखा हेर्छन कन्चन अनि तुरुक्क आँ,सु झारिरहन्छन । आखिर के कारणले उनको एक मुट्ठी मात्र सा,स बसिरहेको छ त ? आखिर कन्चनको घिड-घिडो के मा रोकिएको छ ? अत: कन्चनका ती आँखाहरुले अनिशालाई नै पर्खिरहेको धेरैले आँकलन गरेका थिए । तर कन्चनको ममिका अनुसार उनले अनिशालाई भेट्न नचाहेको भताएकि छिन । अनिशाकि ममिले भनिन् ; “एकपटक होसमा आउँदा हामिले बाबुलाई सोधेका थियौ । अनिशालाई भेट्न मन लागेको छ हो भनेर सोध्दा उनले भेट्दिन भनेको थियो ।” अनि अर्को वाक्य उसले मेरो लाईफ ड्या, मेज भयो सम्म भनेको थियो । बस्, उसले बोलेको बोली यहि मात्र थियो । अब हेर्नुस् पूरा भिडियो